Tenga Kurekodha & Kutenderera USB Maikorofoni Yelaptop & Makomputa - Yemahara Kutumira & Hapana Mutero | WoopShop®
Kurekodha & Kutenderera USB Microphone Yekombuta & Makomputa - Russian Federation / Nhema yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Transducer: Electret Maikorofoni
Yakarayirwa musi waAugust 18. Yakatumirwa nemutumwa 26 kunharaunda yeVoronezh. Yakarongedzwa zvakanaka. Maikorofoni pachayo, pasina kukuvara. Hunhu hwekurekodha hunokodzera ini zvachose. Kunyanya pamutengo wakadaro. Kune ma strims, izwi revhidhiyo rollers, kana kungogara mukupokana rinokwana zvakakwana. Saka, pachangu, ndinofara chose.
Chigadzirwa chakasvika mukati memazuva asingasviki makumi matatu mudunhu mangu, chakauya chakazara. Kunyange zvakadaro haina kuedzwa, asi inoita seyakanaka mhando chigadzirwa.
Yakagamuchira chigadzirwa chakanyatsorongedzwa, mune yakachengetedzwa zvakanaka. Kunyangwe ndatonakidzwa nechigadzirwa, ndichiri kuita bvunzo uye zvinoita kunge zvese zvakakwana kushandisa izvo zvinopa maikorofoni.